Pol Roger Reserve Brut 12L chishamiso chakanakira chero zviitiko zvakakosha. Chingave chipo chemuchato, gore, zuva rekuzvarwa kana kupemberera mune yakanaka kambani.
Zvese kuziva-kwefesheni yedu kunoratidzwa mukukwanisa kwayo kubereka gore rega rega musanganiswa unoenderana musita uye nemhando. Yakashongedzwa uye yakanatswa, iyo cuvée Brut Réserve ndiyo champagne yezviitiko zvese.
Iyo Brut Réserve musanganiswa muzvikamu zvakaenzana zvemhando nhatu dzemazambiringa champenois: pinot noir, pinot meunier uye chardonnay kubva pamakumi matatu akasiyana crus. 30% yekuchengetedza waini anoshandiswa kugadzira iyi cuvée:
- Iyo Pinot Noir (inounza chimiro, muviri uye simba) inonyanya kugadzirwa kubva kune yakanakisa crus yeMontagne de Reims.
- Iyo Pinot Meunier (inovimbisa kutsva, kutenderera uye kubereka michero) inoburitswa kubva ku crus yakati wandei kubva kuVallée de la Marne uye kubva kuEpernay.
- Iyo Chardonnay (inowedzera kunhuhwirira kwayo kuomarara, kupenya, runako uye kureruka) kunobva kuEpernay uye imwe yeakanakisa crus yeCôte des Blancs.
Mushure memakore mana kukwegura mumatura edu, maitiro ayo anosanganisa kuomarara, kuenzanisa uye mutsauko.
Kuvandudza & Kukura
Kamwe pakukohwiwa, mazambiringa anobva angotsikirirwa zvine mutsindo. Iyo inofanirwa kuenda kune yekutanga débourbage (kugadzirisa) kuimba yekudhinda uye yechipiri muhotera yedu, ku froid (pa6 ° C) kweanopfuura maawa makumi maviri nemana. Iko kunwiwa kwechidhakwa kunoitika pane yakaderera tembiricha (24 ° C) mune tembiricha-inodzorwa isina simbi mavhoti, nemhando yega yega uye kugadzirwa kwemusha wega wega kwakaramba kwakaparadzaniswa kusvika kwekupedzisira kusanganisa. Wese maini edu anoenda kuburikidza nemalolactic Fermentation. Mushure mekuravira, kusanganisa pamwe nekuisa mumabhodhoro, iyo yechipiri yekuvirisa (mubairo wemousse) uye kukura kunoitika munzvimbo inotonhorera yemasura edu ari 18 metres pazasi pemugwagwa. Bhodhoro rega rega rinopihwa chinyakare remuage (ruoko riddling) isati yadhonza uye kuyerwa, uye waini inozorora kwemwedzi mishoma isati yaburitswa.
Pol Roger Brut Anochengetedza diplays yakanaka yegoridhe mashanga ane mavara hue, pamwe neakawanda uye akanaka mabhuru. Nemhino ine simba uye inokwezva, inotanga kuburitsa hwema hwezvibereko (peya, mango ...) uye ndokuburitsa mwenje unonaka wehoneysuckle uye jena jena, inononoka pane vanilla uye brioche manotsi. Shure kwekurwira kwakasimba uye kwakasimba, waini yacho inopindirana nekudyidzana kwakanaka uye nekunaka kutsva, uku ichichengetedza imwe chimiro. Pamuromo, zvinwiwa zvemichero yakabikwa (quince jelly, apricot jam) zvinofara kusangana pamwe nezvinonhuwira zvewakisi uye huchi hweacacia. Iyo inonhuwirira inogara kwenguva refu, inoumbwa nezvose zviri zviviri muchero (candied orenji svuura, tangerine ...) uye zvinonhuwira manotsi (cardamom, anis) yakatanhamara.
Maumbirwo uye vinosity, runako uye kutsva, yakatorwa mune iyi Brut Réserve inopa mukana wakaringana pakati pesimba nefinesse, ichiita iyo waini inoshamisa kuti ishandiswe se aperitif, kana kuperekedza kudya kwese.